Ukuvezwa Kwemfihlo Kwe-Web Hosting (WHSR): Ukubuyekezwa, ukuqhathanisa namathiphu
Yembula ingqalasizinda nolwazi lwe-web technology lwanoma iyiphi iwebhusayithi.
Ukusingatha Iwebhusayithi okokuqala?
Umhlahlandlela wethu wokusingathwa newebhusayithi ufana nemephu - uwusizo kuphela uma wazi ukuthi kufanele uhambe kuphi.
Udinga ukuqonda lokho okudingayo kusuka kumphathi webhubhu ngaphambi kokukhetha eyodwa.
Ukuze uthole amasha omusha, umthetho we-no-brainer uhlale uqala encane ngesicwangciso esingabizi njengokwakhelwa okwabiwe. Kubasebenzisi abathuthukisiwe, ukusetshenziselwa isayithi lakho kubalulekile - lokhu kusho ukuthi udinga isisombululo esisimeme nesingaguquguquki.
Igayidi lesinyathelo ngesinyathelo ukusingathwa kwewebhusayithi yakho yokuqala
Indlela ukusingatha iwebhu negama lesizinda kusebenza ngayo
Indlela yokukhetha umhlinzeki obamba iqhaza
Indlela yokuhambisa isayithi lakho kumphathi omusha wewebhu
Isevisi engcono kakhulu yokubamba ngezansi kwe-$ 5 / mo
Izinsizakalo zokubamba ngama-imeyili ezihamba phambili
Ukubamba okungcono kakhulu kwebhizinisi elincane / eliphakathi
Thola Ukusingathwa Okuhamba Phambili kweWebhusayithi Yakho
Ayikwazi ukunquma ukuthi iyiphi i-web host yokuhamba nayo?
Siyabhalisa futhi sivivinye amasevisi wokubamba iwebhu ukuze ukwazi ukusika ukuxosha bese ukhetha izixazululo ezinhle kakhulu - Bona uhlu olugcwele lwezibuyekezo zethu lapha.
Sebenzisa ithuluzi lethu lokuqhathanisa ukuqhathanisa uhlu olubanzi lwezinkampani zokubamba. Ungakwazi ukuqhathanisa nezinkampani ze-3 zokubamba kanyekanye futhi ubala yonke imininingwane oyidingayo njengokulinganisa kwethu, amanani, izici eziyisisekelo, kanye nokubuyekezwa okusheshayo nokubuyekezwa kokuqapha.
Bheka Izinqola Zethu Zokubamba I-Web ezi-10 ezihamba phambili
Ithuluzi lokuqhathanisa nethimba
Ithuluzi le-WHSR Web Comparison Tool
Qhathanisa: I-BlueHost vs InMotion Ukusingathwa
Qhathanisa: BlueHost vs SiteGround
Qhathanisa: I-Hostgator vs SiteGround
Izibuyekezo ze-Web Hosting
Ukubuyekezwa kokusingathwa kwe-A2
Ukubuyekezwa kwe-InMotion Hosting
Isifundo seMakethe: Ungakanani Okukhokhelwa I-Web Host?
Amanani wokubamba ashintshile kakhulu ku-10 yokugcina iminyaka engu-15.
Ekuqaleni kwe-2000, iphakheji le-$ 8.95 / mo enezici eziyisisekelo kubhekwa njengezishibhile. Khona-ke intengo iwele ku-$ 7.95 / mo, bese i-$ 6.95 / mo, i-$ 5.95 / mo, futhi iphansi.
Sifunde imikhuba yamakethe yakamuva futhi sathola ukuthi, ngokwesilinganiso ...
Uhlelo lokuhlanganyela okwabelwana ngezinga lokungena libiza i-$ 3.40 / mo ekubhaleni & $ 4.94 / mo ngesikhathi sokuvuselelwa,
Uhlelo lwe-VPS lwezinga lokungena libiza i-$ 17.20 / mo ngokubhalisa & $ 20 / mo ngesikhathi sokuvuselelwa, futhi
Izinhlelo eziphezulu kakhulu ezabelwana ngazo futhi ze-VPS ngeke zilahle imali engaphezu kwe-$ 25 / mo ne-$ 170.
Uma kwenzeka uzibuza ukuthi kufanele ukhokhe kangakanani ngokusingatha iwebhu ...
Funda Isifundo Sethu Kwizindleko Zokusingatha Iwebhusayithi
Ikhodi yekhuphoni yeGreenGeeks
Ikhodi yekhuphoni: I-10YEarsGREEN Kulabo abhalisela i-GreenGeeks okokuqala, sebenzisa le khodi yekhuphoni ukugcina kuze kufike ku-70% ekusingatheni okwabiwe (chofoza lapha uku-oda). Ukudalulwa: I-WHSR ithola imali yokudluliselwa ...
Ikhodi yekhuphoni ye-Interserver
Ikhodi Yekhuphoni: I-WHSRPENNY Unentshisekelo ekubanjweni okwabiwe kwe-Interserver? Manje usungazama ngama- $ 0.01 kuphela ngenyanga ngekhodi yephromo “WHSRPENNY” (chofoza lapha uku-oda). Ukudalulwa: WHSR…
Amakhodi weKhuphoni le-GlowHost
Ikhodi yekhuphoni: WHSR30 Kulabo abathenga okokuqala eGlowHost, sebenzisa le khodi yesaphulelo ukuze uthole ama-30% ukuphuma ezinhlelweni zokubamba iwebhu ze-GlowHost (chofoza lapha uku-oda). Ukudalulwa: I-WHSR ithola…
Okuningi kwi-Website Hosting
Ingabe Ukusingathwa Kwamafu Kwangempela kufana neDijithali yolwandle? Ukushona Ngokujulile Kwentengo Yamafu
I-Cloud Computing kuphela ethengiswe kakhulu eminyakeni eyishumi edlule. Ngokwezobuchwepheshe, umqondo ubukhona isikhathi eside. Igama elithi 'iCloud' ikakhulukazi likuse-Ref…
I-SiteGound inedumela elihle ekusingatheni iwebhu kodwa ukuhamba kwamanani entengo kwakamuva kuye kwashukumisela abanye ukuthi babheke izindlela ezingabizi kakhulu. Ngamacebo manje aqala ukusondela kukabili emananini, abasebenzisi banga ...
Ungabamba Kanjani Iphrojekthi Yakho elandelayo? Izinsizakalo ezinhle kakhulu zokubamba i-Django
I-Django iyisidididi ngoba iniche njengoba injalo, uthando lwalesi sakhiwo lubukeka luzodwengulwa phakathi kwezimbangi ezimbili ezithokozisayo - i-United States neRussia. Noma kunjalo, kuningi esingakuthanda i-dev…
Izindlela ezi-7 ze-GoDaddy zokusebenzisa i-Domain nokubamba
I-GoDaddy ingahle ibe 'ngubaba omkhulu' wemisebenzi yokusingathwa kepha enkulu kakhulu ayiyona ehamba phambili. Isungulwe ngonyaka we-1997 njengeJomax Technologies, le Behemoth yase-Arizona-ekhanda namuhla isebenza ngaphezulu kwezigidi eziyi-18…
Abahlinzeki Abahamba Ngokuhamba Kakhulu Kwamafu ngo-2020
Abahlinzeki abasa kakhulu be- “Cloud” namuhla banikela abasebenzisi ngaphezu kweqoqo lezinsizakusebenza. Bajwayele ukuzihlukanisa emakethe eselivele ligcwalisiwe. Ngamasethingi we-web becomin…
Abahlinzeki Bokubamba Be-VPS Abahamba phambili Abacabangi (2020)
Izinhlelo zokusingathwa kwe-VPS ngamaphoyinti wamandla iningi lesisombululo sosizo lwabanikezeli bewebhu. Bayindawo emnandi yokuguquka kwabasebenzisi abaningi futhi eqinisweni, kulapho iningi labo ligcina khona lapho lingathola…
I-Plesk vs cPanel: Qhathanisa Iphaneli Yokulawula I-Web Edume Kakhulu Emhlabeni
Iphaneli yokulawula iyingxenye ebalulekile yomlando wethu wokusingathwa kwewebhusayithi futhi nokho abaningi bethu sibanikeza ukucabanga okuningi. Isibonelo, Ubuwazi ukuthi amaPaneli Olawulo Wokubamba Iwebhusayithi ahamba phambili…
* Ukuvuselelwa: Uhlu lwamanani nentengo yokuqhathanisa kuvuselelwe. Sonke siyawathanda ama-freebies futhi akufanele kusimangaze ukuthi ngisho nasekuphatheni i-web kunamathani wamahhala uma wazi ukuthi ubhekephi. Hhayi…
Icala elifuna ukwazi igama lika Absolutely Free Domain Name
Ngaphezu kwamagama wesizinda wezigidi ze-348 ababhalisiwe njengekuphela kwe-2018, amagama wesizinda ashisa ukuthengiswa kwezimpahla. Eqinisweni, kuye kwaba nesidingo esikhulu kangangokuba i-Internet Corporation yamagama abelwe ...
Ungayakha kanjani ibhulogi yakho yokuqala usebenzisa i-WordPress? Ungayenza kanjani imali yokubloga? Ungakukhulisa kanjani ukusebenza kwethrafikhi yakho? Yimaphi amathuluzi afanele wokubloga okufanele uwasebenzise?
Funda konke - kusuka kwizisekelo kuya kuma-blog asathuthukile wokuthengisa ama-blog kusuka kuma-problogger abekhona "futhi akwenzile lokho".
Ungaqala kanjani iBhulogi ngo-2020
Amathiphu Wokubloga we-WHSR
Ukuthola Amazwana weBlog 8,000: Isifundo Sezenzakalo
Muva nje ngithole ukuphawula kwami ​​kwe-8,000th ku-Blogging From Paradise. Ngemuva kokushaya lesi senzakalo esibaluleke kakhulu ngifuna ukwabelana ngesifundo socansi ukuthi ungathola kanjani imibono ye-8,000 kubhulogi yakho futhi. Kungani ufuna ukuqala ...
Iyiphi isithiyo esikhulu esibhekene nayo yonke ibhulogi ebusayo? Izama ukukhetha igama lebhulogi yabo. Ukubiza ibhulogi kungaba nzima kakhulu, ikakhulukazi uma usanda kushayela yonke ibhulogi nokufaka uphawu lokufaka uphawu. ...
Izenzo zokuBloga ezinhle kakhulu kubhulogi ezingenzi nzuzo
Ibhulogi ingaphezu kwendlela yokuthumela izibalo bese ucindezela ukukhishwa mayelana nenkampani yakho. Eqinisweni, isetshenziswe kahle, ukubhalisela ukungenzi inzuzo kungaba yithuluzi elibalulekile lokuqinisa umkhiqizo wakho ...
Ukuqalisa i-Online Venture
Wonke amabhizinisi adinga i-online eqondile - Udinga isikhala esiku-inthanethi ukwakha ibhizinisi lakho, ukuthengisa imikhiqizo noma ukuthola igama lakho lapho.
Akudingeki ube yi-tech geek noma umlimi.
Landela indlela efanele. Khetha amapulatifomu afanele. Sebenzisa amathuluzi wokushicilela okulungile. Uzoba 100% kahle.
Izindlela ezintathu Zokwenza Iwebhusayithi / 50 Imibono Yebhizinisi Eku-inthanethi
Umhlahlandlela Webhizinisi Lewebhu wakamuva
I-Chaturbate yindawo ethandwa kakhulu, kepha ukhona yini oke wazibuza ukuthi ubuchwepheshe buni obusebenzisa? Ngemuva kwakho konke, iyakwazi ukuphatha izinkulungwane zokusakazwa ngesikhathi esisodwa kwababukeli abakhulu nganoma yisiphi esinikezwe…
Khulisa Ijubane Lewebhusayithi Nge-Cloudflare (Umhlahlandlela Olula Wokumiswa)
Kuyini i-Cloudflare? I-Cloudflare yaziwa kakhulu nge-Network Delivery Network yayo (CDN). Lokhu kusiza amawebhusayithi ukwehlisa isivinini sekhasi le-web. Indlela eyinhloko yokwenza lokhu nge-caching. Noma kunjalo, Cl…
Ama-cyberGhost Pros: Engikuthandayo nge-CyberGhost 1. I-Romania ingaphandle kwe-14-Eyes Jurisdiction Jurisdiction kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu kumhlinzeki wesevisi we-VPN. Imvamisa, siyazikhathalela…
Amathuluzi ayi-7 wokucindezela i-Webhusayithi yakho ye-Hard Traffic
Ngisho nama-novice kakhulu phakathi kwabanikazi bewebhusayithi ake athola okuthile noma okunye kuhlolwe ukusebenza kwewebhusayithi yabo. Kodwa-ke, iningi lalezi zivivinyo livame ukugxila kulayisha isivinini noma ama-indices wesipiliyoni somsebenzisi. Kodwa yini…
INKHHost isakaza kanjani izinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zebhizinisi kumthengi wesilinganiso
I-KaziwaHost yasungulwa ku-2006 futhi ngaleso sikhathi yayigxile kakhulu ku-Virtual Private Server (VPS) kanye nebhizinisi lendawo yeseva. Kwakungacishe kube yiminyaka emibili edlule ukuthi isikhulu esiphezulu seKumileHost uJustin Sau…
Ukugcina Iso Ukuthembela KuSayithi nge-Freshping
I-Freshping, kanjiniyela yiFreshworks, iyithuluzi lokuhlola iwebhusayithi elilula kakhulu eliqala ngentengo enhle - mahhala. Kafushane nje, kukuvumela ukuthi ubhekele iqoqo le-webs ngokuzenzakalelayo ...
Ukuvikela Ubumfihlo Bakho Be-Inthanethi
Esikhathini sanamuhla solwazi, idatha yimali entsha. Idatha yakho yomuntu siqu iye yaba enye yempahla eyodwa ebaluleke kakhulu etholakala online namuhla futhi njenganoma yini, ingantshontshwa futhi ithengiswe noma ishintshwe.
Izinkampani zizama ukuqoqa imininingwane ethe xaxa kubasebenzisi bazo kuze kube yilapho ziya ngokuya zithinteka ngenkathi amazwe ehlukaniswe ngokuthi angasiphatha kanjani lesi simo.
Ngakho-ke, yini thina njengabantu ngabanye esingayenza ukuvikela ubumfihlo bethu ku-inthanethi? Impendulo kusiholela kuma-VPNs.
Isebenza kanjani i-VPN / Izinsizakalo ze-VPN eziphezulu ezi-10 zokucatshangelwa
Imihlahlandlela Yobumfihlo Eninginingi
Konke Odinga Ukwazi Nge-Cloudflare (Nokunye Ongakwazi)
I-Cloudflare yaziwa kakhulu njenge-Network Delivery Network (CDN). Namuhla sekudlule lokho futhi kunikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezihlanganisa ukuxhumana kwenethiwekhi nokuphepha. Injongo yabo eshiwo: Ukusiza i-bu…
I-NordLynx Ikhuthaza Isivinini se-NordVPN Ngokucophelela
I-NordLynx yisivumelwano esenziwa yi-NordVPN esakhelwe phezulu nge-WireGuard. Lokhu kokugcina kukhulunywe ngabahloli bokuqala abaningi ukuthi babe yisizukulwane esilandelayo kuphrothokholi yokuxhumana. Kodwa-ke, kusukela i-WireGuard i…
Qaphela: Akuzona Zonke i-VPN ezisebenza eChina ezifanayo
Sekudlule iminyaka engamashumi amane izwe laseChina lavula umnotho walo. Kulesosikhathi, izwe selisakaze amaphiko alo phezu kwayo yonke into kusuka ekuhlolweni kwamafutha kuye kubuchwepheshe. Ngaso leso sikhathi,…
I-ExpressVPN vs NordVPN: Yikuphi i-VPN okungcono Thenga?
Emhlabeni wama Virtual Networks angasese, kunamagama amaningi adumile. Akekho odumile mhlawumbe, kune-NordVPN ne-ExpressVPN. Lawa ma-behemoths amabili asebenze kahle enkathini yeminyaka. Okwalabo ...
Kungase kusimangaze abanye, kepha ama-Virtual Private Networks (VPN) avinjelwe kwamanye amazwe. Yize uhlu lwamazwe oluvimba ngokuphelele ukusetshenziswa kwama-VPN lifushane, akhona…
Ukuchazwa Kwemodi Ye-Incognito: Ingabe Kukwenza Ungaziwa?
Imode ye-Incognito yisilungiselelo esivimbela umlando wakho wokuphequlula ukuthi ugcinwe. Ngenkathi abasebenzisi abaningi behlobanisa imodi ye-incognito kuphela nesici sokuphequlula sangasese se-Google Chrome, uhlobo olungaphezulu…
I-People Behind WHSR
I-WHSR ishicilela izihloko futhi ivula amathuluzi wabasebenzisi abasiza ekwakheleni nasekwakha iwebhusayithi.
Imakethe yokubamba igcwele izinkulungwane zabahlinzeki, ngayinye enezinketho ezahlukene. Inhloso yethu ukukhipha izikrini zensimbi futhi sikufinyelele emkhakheni wekhwalithi futhi sizame lezi zinkampani zinikeza.
Funda kabanzi mayelana ne-WHSR